Qedela ukuhlaziywa nokubuyekezwa kwephrinta ye-3D BQ Witbox 2 | Izingxenyekazi zekhompyutha zamahhala
Qedela ukuhlaziywa nokuhlolwa kwephrinta ye-BQ Witbox 3 2D
BQ ungene emakethe yokuphrinta ye-3D Iminyaka engu-3 edlule kumenyezelwa ukwenziwa kabusha kwephrinta ye-Makerbot 3 2D. Ezinyangeni ezimbalwa ngemuva kwesimemezelo, bawukhansela lo msebenzi. Babenesibindi sokuthatha igxathu lokuqunga isibindi futhi wethule iphrinta yokuzikhethela kwabo, i-BQ WITBOX. Eminyakeni elandelayo bethule i- isithwebuli (CICLOP) y iphrinta yekhithi ukuzihlanganisaI-HEPHESTOS).
Ngesikhathi sika-2016 bathengisa imodeli eguqukile yabo bobabili amaphrinta. Izinsiza ezinenani elikhulu lezici ezintsha uma kuqhathaniswa nezinguqulo zazo zokuqala. Namuhla siyahlaziya iqembu layo elikhulu kunawo wonke, i- I-BQ WITBOX 2.
Iphrinta ye-BQ Witbox 3 2D iyi- Iphrinta ye-Cartesian axis 3D lokho kwenza ukuvela nge I-FDM. Ungasebenzisa izinhlobo ezahlukahlukene ze- Imicu engu-1.75mm obukhulu uma nje ukuphrinta kwakho kungadingi umbhede oshisayo
Ngokungafani namanye amaphrinta asemakethe, le phrinta isebenzisa i-elekthronikhi eyakhiwe futhi yakhiqizwa yi-BQ, I-100% i-Arduino iyahambisana. Ibuye ibe ne-extruder eyenzelwe yona ethembekile futhi ethembekile.
2 Izici zobuchwepheshe nokucaciswa kwephrinta ye-BQ WITBOX 3 2D
2.1 Usayizi wokuphrinta, isisindo nendawo
2.2 Isivinini nokulungiswa
2.3 I-BQ yakhelwe i-extruder
2.4 Ezinye izici zobuchwepheshe
2.5 Ukuxhumana, ukusebenza okuzimele nezinhlelo zokusebenza ezisekelwayo
3 Unboxing kanye nomhlangano wephrinta ye-BQ WITBOX 3 2D
3.1 Linganisa ipulatifomu yokwakha
3.2 Lungisa isi-offset sesihlobo sombhede wokwakha.
4 Iphrinta ye-BQ WITBOX 3 2D ngokuningiliziwe
4.1 Kusuka kufayela le-STL kuye ku-GCODE
4.3 Ngesikhathi sokuphrinta
4.4 Iphrinta yomsindo
4.5 Ikhwalithi yokuphrinta nesilinganiso sephutha.
4.6 Ngemuva kwensizakalo yokuthengisa nokusekelwa okuvela kuMphakathi Womenzi
5 Intambo nemicu ye-BQ evela kweminye imikhiqizo.
Sizoqhathanisa ezinye zezici zalo mkhiqizo nabancintisana nabo abanezici ezifanayo zethiyori:
Siyabona ukuthi umenzi ukwazile ukubeka umkhiqizo wawo kahle kakhulu maqondana nomncintiswano ngenani elihle lemali.
Abanye abakhiqizi basanda kwethula uhla olusha lwemishini efaka izinto ezintsha ezibalulekile njenge-Wi-Fi noma i-double extruder, kepha ngaphandle kwalokhu, iphrinta ye-BQ WITBOX 3 2D iseyisinqumo esihle.
Izici zobuchwepheshe nokucaciswa kwephrinta ye-BQ WITBOX 3 2D
Usayizi wokuphrinta, isisindo nendawo
Iphrinta iyimishini esindayo. Kuphelile Ama-30 kilos Basho ukuthi kuzokubiza okungokwakho ukuyisusa ebhokisini lapho uyikhipha bese uyilayisha etafuleni noma ifenisha oyishiya ifakiwe kuyo. Isizathu sokuthi Ama-90% we-chassis wephrinta kuyinto insimbi, kufana nethangi. Ukuze ufake i- indawo yokuphrinta kukhulu kakhulu ( 297x210x210 mm) kudingeka ukuthi iphrinta ibe nayo ubukhulu obunomusa, 508x485x461 mm kungabalwa ikhoyili nokusekelwa kwayo.
Kulesi sici sobuchwepheshe iphrinta idlula kakhulu, ikwazi ukuphrinta ku- izinqumo ezifika kuma-microns angama-20 ngesivinini esifinyelela ku-200 mm / s. Sineqembu elihlukile elingeke lenze iphutha kunoma yini esihlose ukuyiphrinta. Kuzofanele silinganise lawa mavelu kuphela lapho sisebenzisa imicu ethile ethile, njengentambo eguquguqukayo enconyelwa ukuthi iphrintwe ngaphezu kuka-60 - 80 mm / s
I-BQ yakhelwe i-extruder
El extruder ngohlelo lwe- "Double Drive Gear" ithuthukiswe yi-BQ yingxenye yekhwalithi enhle esishicilele ngayo kuyo yonke into esikwazile ukufinyelela kuyo (futhi uzobona kwezinye izindatshana ezikule blog), intambo, izinkuni, ukhokho, intambo eguquguqukayo, i-PETG ...
Le extruder ifaka phakathi ama-sprockets ezinhlangothini zombili ze-filament ukukhuphula ukudonsa okwenziwa ngokuhudula okubalulekile kuya ngase-hotend. Futhi ifaka ithubhu ye-PTFE (i-teflon) lokho kunciphisa ukungqubuzana kwentambo ekuhambeni kwayo ibheke e-hotend okuzoqinisekisa ukuthi intambo izovutha kuphela uma isivele yethulwe ku-hotend. Konke lokhu okungeziwe kuqinisekisa ukuthi ngeke kube khona isimemo sokuphrinta kungakhathalekile intambo esiyisebenzisayo.
Inkinga enkulu yalolu hlelo ukuthi ithubhu iTefon ayimelani namazinga okushisa angaphezu kuka-240ºC ngakho-ke ukuphrintwa kwe-ABS nemicu edinga amazinga okushisa aphakeme akunqatshelwe nhlobo.
Ngezikhathi ezithile kufanele ungene esikhundleni sephubhu le-PTFE ngaphakathiNoma kunjalo, inqubo elula engeke ithathe ngaphezu kwemizuzu eyi-10. Kodwa-ke, kuzothatha amahora amaningi wokuphrinta ngaphambi kokuthi wenze okunye ukufaka esikhundleni sokuqala.
Ezinye izici zobuchwepheshe
Ezweni lapho yonke into inakho konke, noma singasebenzisi uhhafu wemisebenzi yemikhiqizo kamuva, kuyamangaza lokho umenzi akafaki umbhede oshisayo kuzimpawu ze-BQ WITBOX 2. Kamuva kule ndatshana sizongena ngokuningiliziwe mayelana nokuthi yini engakwazi nokuphrintwa uma singenayo ikhompyutha enombhede oshisayo.
Iphrinta ine- ukwakheka okulula nokusebenzayo lapho cishe yonke into yehliselwa emigqeni eqondile. Amapaneli amakhulu okusobala ngamafreyimu amhlophe we-methacrylate kubo bonke ubuso beqembu futhi a umzimba owakhiwe ngensimbi eyenzelwe ngokukhethekile i- singagcina amaphrinta amaningi afanayo.
Iphuzu elengeziwe okufanele babongwe ngalo ukuthi bakwazi ukuklama isethi ukuze azikho izintambo ezibonakalayo, umphumela unobungcweti obukhulu.
Futhi bafake ingidi enokhiye emnyango onikeza ukufinyelela ngaphakathi kwiphrinta, imininingwane enenzuzo ikakhulukazi uma sizothola iphrinta endaweni lapho kungahle kube khona izingane noma abanye abantu abangazi ukuthi yini ingaphakathi lephrinta akufanele liphathwe ngesikhathi sokuphrinta.
Yize iphrinta ine-port ye-COM cusebenza kahle kakhulu ukuphrinta amafayela we-GCODE akopishwe ngqo kwi-SD. Isibonisi esifaka iphrinta sifaka imenyu elula futhi enembile lapho singaqhuba khona zonke izenzo ezidingekayo ukuze zisetshenziswe.
Sikwazile ukuxhuma iphrinta ngetheku le-COM nokuhambisa izimbazo, kepha ukunyakaza okutholakele akubushelelezi njengalokho okwenziwe kwimenyu yemishini uqobo.
Unboxing kanye nomhlangano wephrinta ye-BQ WITBOX 3 2D
Ngenxa yobukhulu nesisindo somkhiqizo, ukupakisha kunohlelo lokuvula olufana nolwamathelevishini amanje. Guqula ezinye izisekeli bese udonsela ibhokisi phezulu. Iphrinta yethu sithola ukuthi ivikelwe ngokufanele ukuze ifike isesimweni esifanele nebhokisi elifaka izesekeli ezahlukahlukene (ezinye zize zanyatheliswa nge-3D) kanye nencwajana yokufundisa yamaphepha aminyene.
Ngokushesha sinqabela ukuthi sifunde imanuwali yokwenza uUkusesha kwe-inthanethi okusheshayo kuziphi izinyathelo okufanele uzilandele ukusebenzisa iphrinta.
I-BQ inesiteshi se-Youtube lapho sithola khona amavidiyo wemisebenzi ejwayelekile esizoyenza ne-WITBOX 2, sithole ividiyo efanelekile futhi ngemizuzu engaphansi kwengu-15 sesivele sisusile i-immobilizer enqoleni yokuphrinta, safaka amapaneli asemaceleni, ukwesekwa kwentambo futhi sidlala nxazonke ngemenyu yephrinta ukulinganisa imishini.
Sisebenzisa enye ividiyo iBQ enayo esiteshini sayo se-YouTube, senza ukulinganisa okudingekayo.
Linganisa ipulatifomu yokwakha
Sekwenziwe ngokuguqula izikulufo ezi-3. I-twist ingenziwa ngesandla ngaphandle kwesidingo sanoma yimaphi amathuluzi futhi kufanele sazi kuphela lapho ukuholwa kwephrinta kuvula ukuyeka ukujikeleza.
Lungisa isi-offset sesihlobo sombhede wokwakha.
Lesi sinyathelo asikho enembile, kufanele lungisa igebe phakathi kombhobho nokwakha ipuleti ukuze kuthi lapho uphrinta ungqimba lwezinto ezisindayo ube nesikhala esanele nje. Uma sishiya isikhala esincane, impahla izonqwabelana kumbhobho obanga, phakathi kokunye, isiminyaminya, uma sishiya kakhulu okokusebenza ngeke kulandelwe kahle phakathi kwezendlalelo. Ngemuva kokuhlolwa okuningana nokuseshwa okuningiliziwe kwe-inthanethi siyaqiniseka ukuthi okungcono kakhulu ukufaka ishidi lephepha elingu-80 phakathi kombhobho nesisekelo bese sinciphisa ibanga size sibe nobunzima bokuhambisa ishidi ngezandla zethu.
Isinyathelo sokugcina okufanele usithathe ngaphambi kokuphrinta, kufanele uyinikeze i- ukwelashwa okufanele kwendawo yokuphrinta. Ijazi elishibhile Nelly lacquer kwanele ukuthola okuprintiwe ukunamathela ngokufanelekile ekuphrintweni okuningi (kufanele kuphindwe ngaphambi kokuphrinta ngakunye futhi kuhlanzwe isisekelo sokungaphezulu kokuphrintiwe okuyishumi noma kunjalo). Noma kunjalo siyakweluleka ukukhohlwa ngokuphelele ngezinkinga ezisontayo, sebenzisa njalo inketho ye-BRIM yeCura. Kuzofakwa ungqimba oluncane lwamamilimitha ambalwa kumbono ohlangothini lwengcezu, kumoshwa inani elincane lezinto kodwa kuqinisekiswe ngokuphelele ukunamathela kocezu esisekelweni.
Njengoba sikhiphe iphrinta saze saqala ukuphrinta into yethu yokuqala, sekudlule cishe isigamu sehora.
Iphrinta ye-BQ WITBOX 3 2D ngokuningiliziwe
Kulesi sigaba sizobe sifuna futhi sibheke amazinga ekhwalithi nemininingwane engabonakala ingaphezu kwamandla. Ngendlela efanayo, inqubo esetshenzisiwe ihloniphekile kakhulu futhi mhlawumbe awuvumelani nanoma yiziphi iziphetho zethu, sishiyele imibono yakho kumazwana.
Kusukela Amaphrinta we-3D Yimishini esindayo okuthi, kuya ngekhwalithi yokwakha, zingaletha ukudlidlizela ngesikhathi sokuphrinta kufanele zibekwe endaweni eqinile futhi zibe nesikhala esanele.
El ukusekelwa kwama-filament spoolsnoma itholakala ku- emuva kwephrinta futhi intambo yethulwa ngomgodi okuthi ngokusebenzisa ithubhu lepulasitiki kuholele okokusebenza ku-extruder. Ishubhu leTeflon elisuka kwekhoyili liye ku-extruder lisebenzisa i-fibonacci njalo ukuthola umkhondo wendlela.
Uma unesikhala esanele, lesi sixazululo sihle kakhulu futhi siyasebenza, uma kwenzeka lokho kuwe njengathi futhi ufuna ukunciphisa ukujula kwephrinta ngangokunokwenzeka, uzokhetha ukuphrinta ukusekelwa ukuze ubeke ikhoyili kuphrinta. Amafayela we-.stl wokuphrinta le ndlela ayatholakala kuwo wonke umuntu kuwebhusayithi yomkhiqizi.
Ngendlela efanayo ikhebula lamandla. Ingena kuphrinta nge-engeli elifanele, uma umenzi enikeze ikhebula nge-engela engu-90 degree ngemishini, sizozuza amanye amasentimitha ambalwa.
Kusuka kufayela le-STL kuye ku-GCODE
Amafayela asetshenziswa yiphrinta ukuphrinta izinto yi-GCODEe. Ngakho-ke, njengabaphrinta abaningi emakethe kuzodingeka ukusebenzisa isoftware ethile ye-laminator ukuguqula ifomethi ethandwayo STL kuya ku-GCODE . Esethu sisebenzise iCura 2.4 ngemiphumela emihle kakhulu, kepha sinezinye izinketho ezifana neSlic3r, Simplyfy3D, skeinforge…. Izinhlobonhlobo zesoftware ekhona namuhla ukuthi singanikela nange-athikili yokukhuluma kuphela ngayo, i-Bq ikhethe ukungakhiqizi isoftware yayo.
Lapho sesinekhadi le-SD elifakwe kuphrinta ngefayela le-GCODE lalokhu esifuna ukukuphrinta, singenza zonke izinyathelo ezidingekayo kusuka kusikrini sephrinta uqobo.
Ngesikhathi sokuphrinta kufayela le- Isikrini sisazisa ngegama lento ephrintiwe, izinga lokushisa lokushisa, isivinini sokuphrinta, i-% ephrintiwe nesikhathi ebesikade siphrinta ngaso. Ngesikrini esikhulu kangaka siphuthelwa eminye imininingwane, yize ingadingekile, kungabongwa. Eminye imingcele kungenzeka kube isikhathi esisele, mm no-gram ephrintiwe futhi asele
Kuyo yonke inqubo yokuphrinta kusuka esikrinini singakwazi ukumisa isikhashana, siyeke, sishintshe izinga lokushisa nokuphrinta kwejubane. Kungaba nokuthakazelisa ukwazi ukwandisa ukugeleza kwempahla ekhishiwe.
Indawo yokuphrinta inezilinganiso zokuphana kakhulu futhi singaphrinta izinto eziningi ngaphandle kwenkinga noma sizokwazi ukuphrinta izingcezu ezinkulu ngaphandle kwesidingo sokwenza izinguquko kuzo. Endabeni yokuphrintwa ngasikhathi sinye kwezinto eziningi, ukuhoxiswa kwentambo ku-extruder nokunemba okukuma-axes kuqinisekisa ukuthi ushintsho entweni eyodwa luye kokunye luhlanzekile futhi luqondile.
Yize kuliqiniso ukuthi ngesikhathi sokuphrinta ungamisa isikhashana ukuphrinta noma, uma kunesidingo, wenze ushintsho lwentambo asikuncomi ngoba ungqimba okwenziwe ikhefu kuzobonakala entweni ephrintiwe. Ngokuqinisekile lokhu kungenxa yezakhiwo zomzimba ze-PLA, njengoba ungqimba esizama ukunamathela kulo lubanda kakhulu, inyunyana ayiphelele.
Isivinini sokuphrinta siyindlela ethokozisayo futhi eyinkimbinkimbi. Yebo kulungile iphrinta ngokweqile iyakwazi ukuphrinta ngejubane lama-200mm / s akuzona zonke izinto zokwakha babe nezici zomzimba ezidingekayo ukuze ukumelana ngejubane eliphakeme kangaka. Okokusebenza ngakunye kuzodingeka senze izivivinyo eziningana size sithole ukumiswa okufanelekile. Kuyathakazelisa ukuthi sidlala ngaleli nani ngoba singazifinyeza kakhulu izikhathi zokuphrinta.
Enye imininingwane esingakwazanga ukuthola incazelo ukuthi izikhathi zokuphrinta ezilindelekile ezivela eCura zifushane ngandlela thile kunezikhathi zangempela zokuphrinta. Sicabanga ukuthi lokhu kungenxa yokuguqulwa okwenziwe yi-BQ kwi-firmware yephrinta ukunciphisa umsindo ngesikhathi sokuphrinta.
Iphrinta ye-BQ WITBOX 3 2D, njengawo wonke amaphrinta, inomsindo. Kepha kunokuhlukahluka okuningi okungathinta izinga lomsindo eliwukhipha. Ukuphrinta ngesivinini esikhulu kumemeza kakhulu, uma sisuse i-methacrylate engenhla ukubeka ukwesekwa kwentambo okukhethwa kukho kuyaphezulu, uma siphrinta ngomnyango uvulekile kuyazwakala kakhulu. Kepha isimo esibi kunazo zonke, nazo zonke izinto ezishubile esisanda kuxoxa ngazo.
Uma sitholakala egumbini elinomnyango ovaliwe emakamelweni ahlanganayo, kuzwakala umsindo omncane kuphela. Nge-smartphone kanye nohlelo lokulinganisa lwe-DB unyawo olulodwa nje kusuka kuphrinta esinayo inani eliphakathi kuka-47 no-57 dB futhi lapho nje siphuma egumbini futhi sivala umnyango sinenani lama-36 dB. Kufanele ukhumbule ukuthi lezi zinhlobo zezicelo azinembi kakhulu, kepha zisebenza ukusinikeza umbono onzima.
Ikhwalithi yokuphrinta nesilinganiso sephutha.
Uma kukhona okuthile esikuthandile ikakhulukazi ngale phrinta yikhwalithi ephezulu ephrinta ngayo. Noma ngabe kwenziwa ezinqumweni eziphakeme noma ezinqumweni eziphansi, ukuphrinta kubushelelezi kakhulu futhi awekho amaphutha. Siphrintile izivivinyo ezahlukahlukene zokucindezeleka futhi iphrinta iyazidlula kalula.
Ngokomlando, i-BQ ibinomphakathi osebenzayo kakhulu kuyo yonke imikhiqizo yayo ekwazi ukuxazulula izinkinga zomkhiqizo ngisho nangaphambi kokuba insizakalo yezobuchwepheshe yenze. Esithangamini esisemthethweni seMibqyyo kunentambo ehlukile yalo mkhiqizo lapho abasebenzi benkampani babamba iqhaza khona futhi baphendule konke ukungabaza okuvelayo.
Futhi umkhiqizi wenza amakhasimende akhe atholakale ngocingo, i-twitter kanye ne-imeyili ukuzama ukumboza zonke izindlela zokuxhumana. Kusuka kunoma yimiphi imizila esiyisebenzisayo bazosinika ifayili le- ukwelashwa okwanele futhi okulungile, kufanele ubuyekeze imibono nemilayezo yakamuva ukuze uyibone.
Ukuba ngu- iphrojekthi yomthombo ovulekile kulula ukuthola ukuguqulwa kokubili ileveli yomzimba neyehadiwe yezici ezithile zeprinta. Umkhiqizi unayo nomsebenzisi wayo engxenyeni yeThingiverse. Elinye iphuzu lebhonasi le-BQ lokusekela Umthombo Ovulekile !!
Kodwa-ke, sibheka ukuthi kukhona izindawo eziningi kakhulu lapho singathola khona imibhalo nezinto zokuxhasa iphrinta; iwebhusayithi esemthethweni, ingosi yeDiwo, mibuko, Youtube. Umenzi kufanele enze umzamo wokugxilisa lonke ulwazi ngangokunokwenzeka.
Intambo nemicu ye-BQ evela kweminye imikhiqizo.
Iphrinta lilethwa nge-spool eyodwa yekhilo ye-Red PLA Filament. Intambo ye-BQ ilungele kakhulu ukwenza okuvelayo kokuqala ngephrinta yethu ye-BQ WITBOX 3 2D. Inamathela kahle kupulatifomu yokwakha, igeleza kahle futhi njalo yi-extruder. I- izinto eziphrintiwe, noma ngabe amaphesenti okugcwalisa aphansi, azoba ne- ubunzima obukhulu. Ngakolunye uhlangothi, lobu bunzima futhi buzosenza sibe ngaphezulu Kunzima ukususa izakhiwo ezisekelayo ezintweni eziyinkimbinkimbi.
Ikhwalithi nokuthembeka kwekhanda le-extrusion kusivumele ukuthi siphrinte sisebenzisa imicu ehlukahlukene evela kubakhiqizi abahlukahlukene, ukuthola imiphumela emihle kakhulu ngayo yonke.
Ungabheka ezinye izindatshana esisanda kuzishicilela nale micu:
Sihlola imicu yokhokho nezinkuni kusuka kuFomuFutura
Sihlaziya imicu yezinhlobo ezahlukahlukene ezinikezwe yiFilament2Print: FilaFlex, carbon fiber, Gold filament and Metallic filament
Sihlaziya intambo ye-PrintedDreams PLA, kulokhu intambo ebomvu
El Intengo esemthethweni yephrinta ngu- € 1690 esitolo esiku-inthanethi somkhiqizi, futhi sisatshalaliswa ezitolo ezinkulu kakhulu zabathengi. Ngakho-ke kulula ukuthi komunye umkhankaso othile walezi zikhungo singakuthola ngentengo ephansi kakhulu.
Ngemuva kokuhlola iphrinta izinsuku ezingama-45 futhi iphrinta ngaphezu kwamahora ama-5 ngosuku, singaqinisekisa ukuthi sisebenzisana nemishini ethembeke kakhulu, okuthi ngemuva kokuphrinta okuningi nokuningi kuqhubeke nokuphrinta njengosuku lokuqala. Ngefayela le- isivinini esiphakeme ngokweqile nesinqumo sokuphrinta esifanelekile.
Ngaphandle kokungafaki umbhede oshisayo, izinhlobonhlobo zemicu esingathola ukuthi ayidingi lesi sici zizosenza singaphuthelwa. Sivivinye zonke izinhlobo zemicu futhi singakuqinisekisa ukuthi iphrinta iyakwazi ukuthola imiphumela emihle nganoma iyiphi yazo.
Sikhumbula ukuxhumana okungenantambo kanye nokusetshenziswa kalula kusuka kumadivayisi eselula.
Usayizi nesisindo sephrinta kuzodala abathengi abaningi abangaba khona ukuthi babuyele emuva ekubeni bengenayo indawo yokuyibeka ekhaya. Kepha uma kungelona icala lakho uzoba neqembu lezimpawu ezinhle ngentengo ephansi.
I-BQ Witbox 2
Indawo ephrintiwe kakhulu
Iphrojekthi Yomthombo Ovulekile
Iphendula kahle ekuhlukaniseni kabanzi imicu evela kubakhiqizi abahlukahlukene
Umnyango okhiyekayo wokuphepha okungeziwe
Indawo engemuva ye-filament inyusa usayizi wephrinta
Ayinakho ukuxhumeka kwe-Wi-Fi
Ukuma kwesixhumi samandla akulungile
Indlela ephelele ye-athikili: Izingxenyekazi zekhompyutha zamahhala » Ukuphrinta kwe-3D » Qedela ukuhlaziywa nokuhlolwa kwephrinta ye-BQ Witbox 3 2D
Nginombuzo. Umkhiqizo we-BQ kusukela namuhla awunikeli insizakalo yezobuchwepheshe, ngoba inkampani isivaliwe. Yini engenziwa ngamaphrinta ama-3d alo mkhiqizo ngaphandle kwalokhu kusekelwa?
Njengoba usho, i-BQ ayisekho kanjalo, ngenxa yokulahleka komnotho yathengiselwa iqembu laseVietnam, futhi manje iningi labasebenzi bayo kubonakala sengathi lishiywe lingakhokhiwe namakhasimende ngaphandle kosizo lobuchwepheshe. Kuze kube kungekudala, iMadrid Smart Labs ibiphethe ukuhlinzeka ngezinsizakalo zangaphandle zezobuchwepheshe zamadivayisi we-BQ, kepha lapho ifektri ivaliwe, nabo bayekile ukuxhasa ngenxa yokushoda kwempahla.
Kusuka kubanikazi bamanje, kucatshangwa ukuthi bezizosekela eSpain ngeVimSmart kuya kwi-BQ ebisenesiqinisekiso, kepha angazi kahle uma lokho kwenzeka, noma kuzokwenzekani ngemishini engasekho inesiqinisekiso ... Ngicabanga ukuthi kufanele ucabange ngokuzilungisa uma ukwazi, noma ngokushintsha imishini ...
Le phrinta ye-3D iyakwazi ukukhiqiza ushingamu wangokwezifiso
I-Orange Pi isivele inesitolo esisemthethweni esinamaphakheji we-Canonical snap